Neymar maku biiri doonaa kooxda Real Madrid? – Bandhiga
Neymar maku biiri doonaa kooxda Real Madrid?
Kabtankii hore ee Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay inay caadi tahay oo uu ka murugoon doonin haddii uu saaxiibkii hore ee Neymar uu ku biiro Real Madrid isagoona sidoo kale sheegay inay adkaan doonto inuu xiddiga reer Brazil dib ugu soo laabto kooxda reer Catalonia.
26-jirka ee PSG ugu biiray lacagihii ugu badnaa ebid kubbada cagta 200 milyan ayaa sideed koob Iniesta kula guuleystay berigii ay wada joogeen Nou Camp.
Yeelkeede, Laacibka ayaa ka shallaynaya go’aankii uu uga tagay Barca uguna dhaqaaqay gegada Parc des Princes, waxayna wararka intaa ku darayaan inuu soo dhaweenayo fursada uu dib ugu soo laabanayo Spain.
Kooxda la coltanta Barca ee Real Madrid ayaa si joogta ah u raajicineysay Neymar, Iniesta ayaana sheegay inuusan ka xumaan doonin haddii uu saaxiibkii hore ku biiro Los Blancos.
“Ima dhaawaceyso, maxaa yeelay waxaa jiray go’aamada qaar oo haddii ay dhacaan ay tahay sidii ay u dhaceen, Real Madrid waxay isku xoojisaa xiddigo naadir ah,” Iniesta ayaa sidaa u sheegay Cadena Ser.
Rugcadaaga reer Brazil ayaa sidoo kale la waydiiyay wararka Neymar la xiriirinaya inuu dib ugu laabanayo Barcelona.
“Waxaan aaminsanahay inay midaa adag tahay, Sida muuqata Neymar wuxuu weli ku dagalamayaa inuu noqdo mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican adduunka, farqi ayuuna ka sameynayaa koox kasta uu ku biiro. Laakiin ma sahlana inuu soo laabto.”.